MYU SHADAN: November 2012
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းေ၇းအတွက် .. ကချင်အေ၇းကို ဘက်မလိုက် ဖဲ ကူညီကြမလား? ဘေးထိုင်ဘုပြော ကချင် စစ်ပွဲ ပိုကြီးအောင် လုံ့ ဆော်ကြမလား?
‎Tu Lum Um
ဒီမနက် အိပ်ယာက ထထချင်း ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို တခုချင်း ကြည့်တယ်၊ Aye Chan Mon Media ကိုသဘောကျတယ်၊ Aye Chan Mon Media ထဲက ...
သတင်းတခု ကြောင့် ဒီစာေ၇း ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်၇တယ်။ အဲဒီ .. ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ် စခန်း သွားေ၇ာက်စဉ် တရုပ်အစိုး၇ အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သတင်းပါ။ အဲဒီ သတင်းကို Aye Chan Mon က Tin Latt FB ပေါ်က ယူပြီးတင်လိုက်တာပါ၊ Tin Latt ၇ဲ့အမြင်က ဗကပကို တရုပ်က ကူခဲ့တယ် အခုလည်းတရုပ်က KIA ကိုကူညီနေတယ် လို့ ဆိုထားတယ်။
(Tu Lum Um) ရဲ့ FB စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by myu shadan at 8:29 PM No comments:
26 November 2012Written by ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန
Posted by myu shadan at 7:50 PM No comments:
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူထားသည့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တောင်ပိုင်းနှင့် အစိုးရတပ်များ ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ SSA တောင်ပိုင်းဘက်မှ ၁ ဦးကျဆုံး၍ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်း အခြေစိုက် လှုပ်ရှားနေသော အစိုးရတပ်၏ ခြေလျင်တပ်ရင်း အမှတ် ၅၅၃၊ ၅၅၄ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၃ နာရီခန့် အကြာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း SSA တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ အစိုးရတပ်ဖက်မှ အကျအဆုံးနှင့် ဒဏ်ရာရစာရင်းကိုမူ မသိရှိရပေ။
Posted by myu shadan at 7:39 PM No comments:
ပန်းချီပြပွဲ ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် ဈေးအမြင့်ဆုံး အဖြစ် ရောင်းချခဲ့ရသော ပန်းချီကားနှင့် ပန်းချီဆရာ မင်းသူရိန်
ပြည်နယ် စစ်ဘေးသင့် ဒေသတွင်ရှိသော တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ ဒုက္ခကို ကူညီ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းစေရန် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးပါဝင်၍ ဖားကန့်မြို့မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန္ဒပြု လက်မှတ် ၁ သိန်း ၁ သောင်းကျော်ကို အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်က သမ္မတရုံးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ကေအိုင်အေမှ တာဝန်ရှိခေါင်း ဆောင်များ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများထံသို့လည်း စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူများ ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး အဖွဲ့မှ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“စစ်ပွဲတွေကြာမြင့်နေတာနဲ့ အမျှ ဘယ်လောက် ကယ်ဆယ်ရေးပဲ လုပ်လုပ် ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွေ ကတော့ ပျက်စီးမှာပဲ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကလည်း ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခွန်းမှ မပြော ဘူး။ လုံးဝ အားမရပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ စာမျက်နှာမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကချင်စစ်ပွဲဟာ မှေးမှိန်နေပါတယ်။ ကချင် စစ်ပွဲဟာ တိုင်းပြည် ရဲ့ တခြားအရေးအခင်းတွေကိုပဲ အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် မငြိမ်းချမ်းရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်း မငြိမ်းချမ်းပါဘူး။ နိုင်ငံကြီး မငြိမ်းချမ်းသေးသမျှ တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးလာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်”ဟု လူမှု ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးခင်မောင်ဝင်း က ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူများကို စိတ်ဓာတ် ပြန်လည်မြှင့်တင် ပေးရန်နှင့် စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုမှာ များပြားလျက် ရှိကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ယင်း ကချင် စစ်ဘေးသင့်ဒေသရှိ တိုင်ရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အတွက် ရည်ညွှန်း၍ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ပန်းချီပြပွဲ တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပွဲစီစဉ်သူ ဒေါ်ဖြူအိသိမ်းက “အဓိက ကတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစား ချက်လေးတွေကို ပြေပျောက် စေချင် လို့ပါ။ အစစ အရာရာ လှူဒါန်းချင် ပေမယ့်လည်း ငွေကြေး မတတ်နိုင်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတာကလည်း အကောင်အထည်မပေါ် သေးတဲ့အတွက် သူတို့ အင်အားမဲ့နေတယ်လို့ ခံစားနေရပါတယ်။ သူတို့စခန်းမှာ နေရတဲ့ အချိန်တွေလည်း အလကားဖြစ်နေတော့ လက်မှုသင်တန်းလေး တွေရှိရင် စိတ်သက်သာရာ ရမလားဆိုပြီး တွေးမိတယ်။ သင်တန်းပေးမယ် ပြီးရင် သူတို့ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ။ လုပ်နိုင်တာတွေကို ဒီဘက်မှာ ဈေးကွက်ဖြန့်ပေးမယ်။ ရောင်းလို့ ရတဲ့ငွေက သူတို့ ဝင်ငွေပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာ ရပ်တည်လာ နိုင်အောင် ခုလိုရန်ပုံငွေပွဲ စီစဉ်ရတာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ပန်းချီပြပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် တော်ဝင်နှင်းဆီ၊ သီရီခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပန်းချီဆရာ ၁၇၀ ၏ ပန်းချီကား ၁၇၀ ကို ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပန်းချီကား ရောင်းရငွေများ ကို ကချင်ပြည်နယ် သို့ လှူဒါန်း မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ပန်းချီဆရာ မင်းသူရိန်ကလည်း “ကျွန်တော့်ဆီက ပန်းချီကား လှမ်းတောင်း တော့ ကျွန်တော်က နယ် ရောက်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကြိုက်တဲ့ ကားယူသွား ရောင်းရရင် ပြီးရော၊ လှူရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး ပေးလိုက်တာ ခုလိုရောင်းရတော့ ကလေးတွေ အတွက်လည်း အလှူဖြစ် သွားတာပေါ့။ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by myu shadan at 11:21 PM No comments:
by MKA on November 25, 2012(myitkyina blog)
စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းပျက်ပြားနေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့မျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေဟာ ရှေ့တန်းမှာ ဆက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုတဲ့ဆန္ဒ ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တပ်စခန်းကနေထွက်ပြေး လျက်ရှိနေကြတယ်။ ရှေ့တန်းထွက် တပ်မတော်သားတိုင်းဟာ နိုင်ငံအကျိုးရလဒ်မျှော်မှန်းစရာမရှိတဲ့ စစ်ပွဲကိုငြီးငွေ့လာနေကြပါပြီ။ အာဏာရှင်၊ အာဏာရူး လူတစ်စုရဲ့ တဖက်သတ်မှားယွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါးကိုအခြေခံတဲ့ စတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထွန်းရေးကို ရုပ်လုံးဖေါ် နေတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အမိန့်ပေးခိုင်းစေမှုတွေကြောင့် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်မှာ တပ်မတော်သား ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ဘ၀စတေးခံခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒီတပ်မတော်သားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဆွေးမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေဟာ မိသားစု ပြိုကွဲခံရပြီး ဘ၀တွေပျက်စီးခံခဲ့ရတာဟာ သောင်း၊ သိန်း ချီနေပြီ။
Posted by myu shadan at 9:27 PM 1 comment:
by MKA on November 25, 2012
နိုဝင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဆယ်လော်(Sai Law)ကျေးရွာတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာအစိုးရစစ်ကြောင်းအင်အား(၅၀)ခန့်သည် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ကိုအသုံးပြုကာ ဆဒုံးဖက်သို့ ချီတက်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
မိုးမောက်မြို့ မှတဆင့် ခ၀န်ဘမ် လမ်းကြောင်းအတိုင်း နိုဝင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ဆင်လုန်ကဘာ (Sinlum Kaba)ကို စစ်ယာဉ်(၅)စီးဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ(၂၄)ရက်နေ့တွင် ခလရ(၁၄၁)တပ်ရင်းမှ စစ်ကြောင်းတစ်ခုသည် ဘန်ဒန်(Ban Dang)နှင့် လောဒ်အောင်(Lawt Awng) တ၀ိုက် စစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားနေပြီး၊ ဗိုလ်ကြီးထွန်းထွန်း ဦးစီးသော အခြားစစ်ကြောင်းသည် ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်း ငှက်ပျောတောဒေသတွင် လှုပ်ရှားကာ၊ အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကလည်း လွယ်ဖာဘွမ်(Loi Hpa Bum) တ၀ိုက် စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေ ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်တုံမြို့နယ်အတွင်း ရွှေလီမြစ် နှင့် နမ့်စီးချေင်း တ၀ိုက်တွင် ခလရ(၂၉၀) တပ်ရင်းအင်းအား(၁၅၀)ခန့် စစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ မုန်ဘော်၊ မန်ပင်း တ၀ိုက်တွင် ခမရ(၅၀၇) စစ်ကြောင်းအင်အား (၈၀)ခန့်လှုပ်ရှားနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ တင်လ(Tin La)ဒေသတွင် ခလရ(၆၈) တပ်ရင်း(၁၅၀)ခန့် လှုပ်ရှားနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ကချင်ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်း မြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ - နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
(irrawaddy)မထင်မှတ်ဘဲ ရွာချလိုက်တဲ့ ဆောင်းတွင်းမိုး ဖွဲဖွဲစိပ်စိပ်ကြားမှာ အပြာရောင် မိုးကာမိုး၊ ၀ါးထရံဖြစ်သလို ကာရံထားတဲ့ တဲကုပ်ကုပ်လေးတွေ ငြိမ်သက်နေတယ်။ ညနေစောင်းလာလေ အအေးဓာတ်က ပိုလာလေဆိုတဲ့ ဒေသမှာ မိုးကလည်း ရွာ၊ အအေးဒဏ်က ကာကွယ်စရာ မီးဖိုကလွဲလို့ ဘာမှ မရှိပါဘူး။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကချင်ပြည်သူ ၁ သိန်းနီးပါး နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူများအဖြစ် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ ဒုက္ခသည် ၁ သိန်းနီးပါးလို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အထဲက ၆ သောင်းကျော်ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေမြေများအတွင်းမှာ နေထိုင်နေကြရပြီးတော့ ၃ သောင်းကျော်ကတော့ အစိုးရ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။
Posted by myu shadan at 4:17 PM No comments:
ပြဿနာ ဆိုတာ အမြစ်ကနေ တူးလိုက်မှ ပြီးမှာပါ။
ခဏဏပြောနေရတဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ပါ။ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေလဲ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ကိုပဲ အားဖြည့်ထားပါတယ်။ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ရဲ့ အထက်အမိန့်နဲ့ လုပ်စားတဲ့ လူတန်းစား ရှိနေသေးသ၍ ပြဿနာ မငြိမ်းနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်…. ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို မပြင်ပဲ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ကို မလျှော့ချပဲ နဲ့တော့ မြန်မာရဲ့ ပြဿနာ ဘယ်တော့မှ ပြီးမှာ မဟုတ်ပါ။
(duwa kachin -facebook)
ကချင်လူမျိုးများဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဖက်ဒရယ် ပုံစံ နယ်စားငယ်များ အတူ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ခဲ့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
နာမည် ကြီးခဲ့သော ဒူဝါများမှာ Hting Nan Duwa, Bawmwang Duwa, Ngalang Duwa, Hkumboi Duwa, Kadaw Lahtaw Duwa, Karing Duwa, Shadan Duwa, Lahpai Duwa, Gumshun Duwa, Tsum Hka Duwa, Hkalen Duwa, နဲ့ တခြား နာမည် အများအပြားလဲ ရှိခဲ့သည်။ (မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ မထည့်ထားပါ)
Posted by myu shadan at 11:23 AM No comments:
ပုံမှန်အားဖြင့် အဆိုတွေ၊ မေးခွန်းတွေ မြောက်မြားစွာကို မေးကြ၊ ဖြေကြနဲ့ နေ့စဉ် အလုပ်များနေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်ကြီးမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတခုတည်းနဲ့တင် လွှတ်တော်တခုလုံး အလုပ်ရှုပ် ဗြောင်းဆန် သွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ လှိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ရဲ့ “တရားမ၀င် ကုန်စည်များ ၀င်ရောက်နေမှုနှင့် တရားမ၀င် ခိုးထုတ်နေမှု များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်း၍ ဥပဒေနှင့် အညီ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်” ဆိုတဲ့ အဆိုကို တင်သွင်းလိုက်လို့ ပါပဲ။
Posted by myu shadan at 11:19 AM No comments:
SSPP/SSA လှုပ်ရှားနယ်မြေ မြို့နယ်လေးခုအား အစိုးရတပ် ထိုးစစ်ဆင်နေ
စနေနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 24 ရက် 2012 ခုနှစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း - သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်လေးခုအတွင်းရှိ သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/ SSA လက်အောက်ခံ စစ်ကြောင်း များနှင့် ယာယီတပ်စခန်းများအား အစိုးရတပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အသိုင်း အဝိုင်းကပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဌာနချုပ်အနီးအနားကလွဲလို့ ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ ကျနော်တို့ကို လိုက်တိုက်နေတယ်။ အခုလဲ သိန္နီ၊ ကျောက်မဲ၊ မိုးမိတ်၊ နမ္မတူ မြို့နယ် တွေထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့စစ်ကြောင်းရဲ့ သတင်းကိုရတာနဲ့ အစိုးရတပ်က နောက်ယောက်ခံလိုက်တိုက်နေတာ” - ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းထူး ကပြောသည်။
အဆိုပါ မြို့နယ်များအတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် SSPP/ SSA လက်အောက်ခံ တပ်မဟာ ၁၊ တပ်မဟာ ၁၅၃ နှင့် ၆၁၂ တို့အား ကျောက်မဲ အခြေစိုက် အစိုးရ၏ စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် စကခ ၁ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများ၊ သိန္နီအခြေစိုက် စကခ ၁၆ လက်အောက် ခံတပ်ရင်းများအပါအ၀င် အောင်လံ နှင့် မန္တလေးမှ တပ်ရင်း အချို့တို့က လိုက်လံတိုက်ခိုက်နေကြောင်း ဝမ့်ဟိုင်းဌာနချုပ် အရာရှိ အသိုင်း အဝိုင်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ကိုဘဲ တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ လူထုတွေကိုပါနှိပ်စက်နေတာ။ အစိုးရတပ်က အင်အားတိုးချချင် လို့ ရပ်ရွာဗုံးကွဲမှုကိုဖန်တီးတယ်၊ လူထု သေကျေဒဏ်ရာရတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့အမာခံလူဆိုပြီး ရပ်ရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူး တွေကို ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တယ်။ အပစ်ရပ်တယ်ဆိုတာ ဌာနချုပ်အနီးအနားဝန်းကျင်လောက်ပဲလို့ ပြောရမှာ။ တခြားနေရာမရပ်ဘူး။ သူတို့က ကျနော်တို့ဆီ ဦးတည်လာနေတာတွေ့ရင်လဲ ကျနော်တို့က တော့ ပစ်ခတ်ရတာဘဲ” - ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ တပ်မှူးတဦးက ပြောသည်။
ထို့အတူသျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်တုံ မြို့နယ်အတွင်းတွင်လည်း မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့ အနည်းဆုံးတပတ်လျင် နှစ်ကြိမ်ခန့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်း TNLA က ပြောသည်။
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည် အစိုးရနှင့်အပစ်ရပ်ရန် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသည်။ သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီကလည်း ၂၀၁၂ ဂျန္နဝါရီ ၂၈ ရက် နေ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော်လည်း ထိုနေ့မှ ယနေ့အထိ တိုက်ပွဲပေါင်း အကြိမ် ၅၀ ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းထူးက ပြောသည်။
Posted by myu shadan at 6:01 PM No comments:
by zz on myitkyina
မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့သည် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ ခုခံကာကွယ်ပစ်ခတ်မှုသာ အထက်အမိန့်အရ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင် က အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက် တွင် ရွှေလီတွေ့ဆုံမှု၌ တုန်တုန်ရီရီဖြင့် လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်က လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသော “လူရောက်နည်း၊ ကျည်ရောက်များ၊ အကျိုးအမြတ် ရရှိရေး” ဟူသည့် ညွှန်ကြားမှုအတိုင်း (၁၀)မိုင်ခန့်အကွာမှ နေ၍ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်မှတ်ချိန်ဆ၍ ပစ်ခတ်ခုခံကာကွယ်မှု ပြုလုပ်နေကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ပရမ်းပတာပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အရပ်သားများ သေကြေဒါဏ်ရာရရှိသူ များပြားလျက်ရှိသည်။
နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ဖားကန့်မြို့၊ ခလရ(၂၂၈) ဗျူဟာကုန်း မှ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာ များသို့ ၈၁ မမ စိန်ပြောင်းဖြင့် (၉)ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ မော်မောဘွမ်၊ တောမော်ဒေသ သို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ သည်။ နိုဝင်ဘာလ(၁၄)ရက်နေ့တွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့(PCG) မော်မောဘွမ် ၌ ရောက်ရှိစဉ် မနက်(၁)နာရီအချိန်နှင့် မွန်းလွဲ(၃)နာရီအချိန်ခန့် တွင် ၁၂၀ မမ အမြောက် ဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပစ်ခတ်ခဲ့သေးသည်။
နိုဝင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့ တွင်လည်း ကားမိုင်းမြို့နယ်၊ ကောင်ရာကျေးရွာ ခရစ်ယာန်ဆုတောင်းတောင် တွင် နေရာယူ တပ်စွဲထားသော ခလရ(၁၃)တပ်ဖွဲ့ သည် ကောင်ရာကျေးရွာတွင်းသို့ ၆၀ မမ စိန်ပြောင်း (၄)ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၌ ကျည်(၁)လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲကြောင်း သိရှိရသည်။
၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ အင်ပေါန်ကျေးရာ တွင် စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်နေသော ခမရ(၃၄၈)တပ်ဖွဲ့ သည် နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ဂန်ဒေါင်ဒူ ဘက်သို့ ၈၁ မမ စိန်ပြောင်း (၃)ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး၊ ဂန်ဒေါင်ယန်တပ်စခန်းရှိ အမြောက်တပ်ရင်း(၃၆၇)ကလည်း ဂန်ဒေါင်ဒူ ဘက်ကို ၈၁ မမ စိန်ပြောင်း (၃)ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့ ထဲမှာပင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့ ခန်းကိုင်အမြောက်တပ်ရင်း (၃၇၀) မှနေ၍ ၁၂၀ မမ အမြောက်ကြီးဖြင့် ဂွန်းမွန်းကျေးရွာ ဘက်သို့ (၂)ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ရွာသားများပိုင် မွေးမြူရေးနွား ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဤကဲ့သို့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ခုခံနေခြင်းကြောင့် ဒေသခံအရပ်သားများ သေကြေထိခိုက်ဒါဏ်ရာရစေခြင်း၊ ဒေသခံများ၏ တနိုင်တပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ဆုံးရှုံးနေရခြင်း၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရခြင်း တို့သည် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ အကျိုးအမြတ်ရရှိရေး ရည်မှန်းချက်ဟု သတ်မှတ်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။
(by:Zaw Hkun Naw facebook)၂၀၁၂၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့ထုတ် အီလဲဗင်းဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ဆရာနန္ဒ၀င်း(ဆေး-၁)ရဲ့ ဆောင်းပါး “ပွဲလှရုံသက်သက်”ကို ဖတ်ပြီးကတည်းက စိတ်ထဲစွဲနေခဲ့တာ..၊ ဒါကြောင့် အဲဒီဆောင်းပါး နာမည်ကိုပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ နံပါတ်စဉ်ထိုးပြီး ခိုးချလိုက်ပါတယ်.။ (မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းခင်လေး ခိုးချရတာ.၊ နောက်ဆို ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး.။) ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ စာမရေးဖြစ်တာလဲ တစ်လကျော်သွားတော့ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်သွားတာအမှန်..။ အခြေအနေမကောင်းလို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နှာစေးနေခဲ့တာ..၊ ခုကျတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုပြန်စရေးရမလဲ မသိတော့ဘူး..။
ဇာတ်လမ်းအစက ဒီလို..၊ ဆရာသုမောင်က “ဒေါက်တာနိုး”ဆိုပြီး အခန်းဆက်ဆောင်းပါးရေးဖူးတယ်.။ တစ်နေ့ ဒေါက်တာနိုးရဲ့ တပည့်တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားကနေ ပညာတော်သင်အပြန်မှာ ဒေါက်တာနိုးအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်မလာမိဘူး..။ ဒါကြောင့် တပည့်ဖြစ်သူက ရန်ကုန်ရောက်မှ အောင်ဆန်းဈေးကနေ ဂျွန်နီလမ်းလျှောက်တစ်လုံး အပြေးအလွှားဝယ်ပြီး နိုင်ငံခြားလက်ဆောင်ဆိုပြီး သွားကန်တော့ပါသတဲ့..။ ဖြစ်ချင်တော့ သူဝယ်လာတာက အတုကြီး..။ အပွေးမြင် အပင်သိ.၊ အတွေ့အကြုံရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာနိုးက ပုလင်းကို ကိုင်ကြည့်တာနဲ့ တန်းသိတယ်.၊ ဒါကောင် အင်မိလာပြီဆိုတာကို..။
အဲဒီတပည့်ကို ဒေါက်တာနိုး ဘယ်လိုပြောလွှတ်တယ်ထင်လဲ..၊ “အေး..၊ အေး..၊ ငါ့တပည့်ကြီး လိမ္မာ လိုက်တာ”တဲ့..။ တပည့်ဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားက လက်ဆောင်ပါမလာပေမဲ့ သူ့ကိုတလေးတစားနဲ့ (ကြောက်တာက ပိုပါတယ်) ဒီရောက်မှ တကူးတကန့် အချိန်လုပြီး လာကန်တော့တာကို သဘောတွေ့လွန်းလို့ပါတဲ့..။ တကယ် သတိတရနဲ့ ၀ယ်လာတာမဟုတ်မှန်း သိပေမဲ့ ဒီကောင်ငါ့ကို ကြောက်သားပဲ ဆိုပြီး ပီတိဖြာနေတဲ့ သဘော..။
ဆရာနန္ဒ၀င်းရဲ့ ဆောင်းပါးက အသုံးအတိုင်းဆိုရင်တော့ ‘အလိမ်ခံနေရသူတွေကိုယ်တိုင်ကလဲ သိသိကြီးနဲ့ ဒီကလေးတွေ ငါ့ကို လေးစားလွန်းလို့ လုပ်ထားတာပဲဆိုကာ ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးစိတ်နဲ့ ပေးသမျှလက်ဆောင်ယူ ကျွေးသမျှအကုန်စားပြီး ကောင်းပါသည် ကောင်းပါသည်ဆိုပြီး လူလိမ်လက်ခံတွေ လုပ်ကြပါတယ်..၊’ တဲ့..။
တလောကလဲ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ Status update လေးတစ်ခု သတိထားမိလိုက်တယ်..၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အ၀တ်တွေထဲက အလန်းဆုံး၊ အလတ်ဆုံးဆိုတဲ့ အထည်ရွေးဝတ်ပြီး “ဘဘဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျန်းမာပါစေ”လို့ အော်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း၊ ဘဘကြီး ပြန်သွားမှ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ဖွင့်စားရတဲ့ ဘဲဥဟင်းတစ်ဖတ်က အရမ်းမြိန်တဲ့အကြောင်း တိုတိုကျစ်ကျစ် ရသမြောက်အောင် ရေးထားတာလေးက အရမ်းလှတယ်..။ ကျနော်တောင် ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားဘ၀ကို ပြန်မြင်ယောင်မိသွားတယ်..။
ကျနော်တို့ ကျောင်းတွေမှာ Multimedia classroom ဆိုတာတွေ ဖွင့်ဖူးတယ်.။ လူကြီးလာမှပဲ ဟိုလူဆီကငှား၊ ဒီလူဆီကငှားနဲ့ ကွန်ပြူတာလေး ၅လုံးလောက်စုပြီး၊ ကျောင်းသား နှစ်ယောက်တွဲ၊ သုံးယောက်တွဲကို ကွန်ပြူတာတစ်လုံးစီရှေ့ ထိုင်ခိုင်းထားတတ်ကြတယ်..။ လူကြီးဆိုသူတွေကလဲ ခေါင်တညိတ်ညိတ်နဲ့ပေါ့..။ ကျောင်းတွေမှာ အမှန်တကယ်သင်ကြားနေတဲ့ပုံစံကို မြင်ချင်တာလား၊ သူ့ကို တခန်းတနားကြိုဆိုတာကိုပဲ မြင်ချင်တာလား.၊ ဘာကြောင့်ဒီလို တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာတယ်ဆိုတာ ကျနော် နားမလည်ခဲ့တာအမှန်..။
လူထုထောက်ခံပွဲတို့၊ ရှုံ့ချပွဲတို့ဆိုတာလဲ လိုက်ရတာ ဗြောင်းကိုဆန်လို့..။ မနက်လေးနာရီလောက် ကျောင်းမှာစု၊ အားကစားကွင်းထိ ချီတက်၊ ဘုမသိ ဘမသိ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါတဲ့ ပြည်သူ့သဘောထားတွေကို ကုန်းအော်ခဲ့ရတာ ခုစဉ်းစားကြည့်ရင်တောင် လည်ချောင်းနာတယ်..။ ကျောင်းသားတိုင်း ကြံ့ဖွံ့အသင်း မ၀င်မနေရဆိုလို့လဲ လျှောက်လွှာဖြည့်ပေးရသေးတယ်..။ ကလေးဆိုတော့ ဘာသိမှာလဲ.။ ပြီးတော့ သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်မှလဲ ဆရာမတွေက ကြည်မှာ မဟုတ်လား..။
ကျနော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံတွေမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ..။ ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာပိုင်စိုးလာမှပဲ ဖျားနာဆောင်ထဲမှာ Air Set (Oxygen) စက်အသစ်တစ်လုံး လာချထားပေးတယ်..။ Defib (နှလုံးနှိုးစက်) တစ်လုံး လာပို့သွားတယ်..။ ၀န်ကြီးပြန်တာနဲ့ ပြန်သိမ်းသွားတာပဲ..။ ကိုင်တောင်မကိုင်ကြည့်လိုက်ရဘူး..။ အင်းစိန်ဆေးရုံမှာ ထောင်ကလွှဲလာတဲ့ အကျဉ်းသားလူနာတွေကို ဘယ်လိုထားတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အသိဆုံး..။ အောက်ထပ်ဆုံး၊ အစွန်ဆုံးနေရာမှာ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် နံနံစော်စော်နဲ့မို့ သူနာပြုတောင် အမျိုးသားသူနာပြုတစ်ယောက်ပဲ ထားတာ.။ ဒါပေမဲ့ မစ္စတာကန်တားနား လာကြည့်တော့ အကျဉ်းသားလူနာ (X2O မဏ္ဍပ်ဗုန်းခွဲတရားခံဟု စွတ်စွဲ ထောင်ချခံထားရသူ)ကို ထားတာက အခပေးခန်းကြီးဗျ..ပြီးတော့ သူတစ်ယောက်တည်း..။ အဲဒီလို အခပေးအခန်းက လူနာ နှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက် ထားလေ့ရှိတယ်..၊ ပိုက်ဆံအရမ်းပေါပါတယ် ဆိုရင်တောင် ဒီလိုအခန်းက တစ်ယောက်တည်း ယူလို့မရဘူး..။ ကျနော်ကတော့ဗျာ…၊ မဟုတ်မခံပြောတတ်ပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အလုပ်ထွက်သွားတဲ့ ကျနော်တို့ဆရာ၊ သမားတော်ကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်စိန်ကိုပဲ ပြေးမြင်ယောင်မိတယ်..။
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုသူရှေ့မှာ ကြက်ဆူဆီပါဆိုပြီး၊ ဒီဇယ်နဲ့ စက်နှိုးပြရတာကတော့ အားလုံးမှတ်မိမှာပါ..။ တကယ်ပဲ မသိတာလား၊ တမင်ပဲ အလိမ်ခံရတာလားတော့ ကာယကံရှင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်..။ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ အလိမ်ခံနေရတဲ့ ငပေါကြီးပါပဲ..။ ဒါပေမဲ့ သူအလိမ်ခံရတာက မနာလိုချင်စရာကြီး..။ သူလာမယ်ဆိုမှ မြောင်းရှင်းတယ်.၊ ဓာတ်တိုင်တွေ ထုံးသုတ်တယ်.၊ မီးမှန်တယ်..။ ဧည့်သည်လာမှ ဟင်းကောင်း သလိုပေါ့..။ ကျနော်တို့လဲ လူကြီးလာမှ ဆီမီးထိန်ထိန်ဘ၀က တက်တော့တယ်..။
လွန်သူကလဲ လွန်ပါပြီ..၊ သွားသူကလဲ သွားပါပြီ..၊ ရွှေတစ်ပိုက်နဲ့ နားသူတွေကလဲ နားကုန်ပါပြီ..။ ဒါပေမဲ့ ပွဲလှရုံသက်သက်ယဉ်ကျေးမှုကြီးကတော့ အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ စီးဆင်းဆဲပါပဲ..။ မရှက်တန်းပြောရရင် အသုံးမကျတာက ကျနော်ရယ်..။ ရွှေရည်စိမ်ဒီမိုကရေစီကိုမှ အထင်ကြီးမိရတယ်လို့..။
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပေါ့…၊ တစ်ချိန်က လားရှိုးမြို့ရဲ့ညဈေးတန်းမှာ ၀က်သားတုတ်ထိုး ထိုင်စားခဲ့ပေမဲ့၊ အခုချိန်မှာတော့ ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နေပြီမို့ သူလာမယ်ဆိုရင် လမ်းဘေးပက်လက်ဖောင်းကအစ ထုံးသုတ်ထားမှ သဘောကျပါသတဲ့..။ ပန်းပွားအကတွေနဲ့ ကော်ဇောနီကြီး ခင်းပြီး ကြိုဆိုမှ မျက်နှာတော်လန်းတဲ့ သူတွေလဲ ရှိနေဆဲပါပဲတဲ့..(သူများပြောပြတာပါ)။ ပွဲလှရုံသက်သက်ထက် ပိုတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးလာရင်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲထဲမှာတောင် မျက်ရည်ကျအောင် အဖြစ်သည်းတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါသတဲ့..(အံ့ရော.. အံ့ရော..)။ အောက်ခြေမှာ ဘာပဲဖြစ်နေနေ.၊ စာပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ လက်မှတ်လေးထိုးလိုက်ရုံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီလို့ ထအော်မယ့် မဟာဉာဏ်ကြီးရှင်များကလဲ အခန့်သားစောင့်နေကြပါသတဲ့..(ရင်လေးတယ်…)။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်၊ ဆူးလေနားမှာပေါ့..၊ ကျနော် တောင်ပေါ်ကဆင်းလာကာစ၊ ရန်ကုန်သူ တိုနံ့နံ့တွေကို ငေးပြီး အနော်ရထာလမ်းကို ဖြတ်ကူးတုန်း ရဲဖမ်းပါရောလား..။ အရင်ကလဲ မီးပွိုင့်နီတုန်း ရပ်ထားတဲ့ ကားတွေကြားကနေ ဖြတ်ကူးနေကြမို့ ကျနော်လဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြတ်ချလာတာ ဒီဘက်ထိပ်မှာ စောင့်နေတဲ့ ခေါင်းဖြူတစ်သိုက်ကို သတိမထားလိုက်မိဘူး..။ အဲလိုနဲ့ ချစ်ချစ်အတွက် ဆလင်းဘက်မ၀ယ်လိုက်ရဘဲ တရားရုံးရောက်သွားပါရောလား..။ ဒဏ်ငွေ ၂၀၀၀ ဆောင်လိုက်ရတယ်..။
စိတ်ထဲမှာလဲ မချင့်မရဲပေါ့..။ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီး အမှန်အကန်ပြောင်းလဲနေပါပြီပဲ.၊ ငါ့နှယ် တောင်ပေါ်မှာ အနေကြာသွားလို့ စည်းပျက်ကမ်းပျက်ဖြစ်ကုန်ပြီ..၊ တောင်ပေါ်က မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေကူးကုန်ပြီရယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ နောင်တတွေရလို့..။ ဒီလိုနဲ့ တရားရုံးကနေ လမ်းပြန်လျှောက်လာပြီး ကျနော်အဖမ်းခံရတဲ့ နေရာရောက်တော့ အလိုလေးလေး…၊ လမ်းဖြတ်ကူးနေကြတဲ့လူတွေဆိုတာ နဲနဲနောနောလား..။ စောနက ကိုခေါင်းဖြူတွေလဲ ဘယ်ပျောက်ကုန်ကြသလဲ မသိဘူး..။ (For show လုပ်ဖို့ အမှုရသွားပြီဆိုတော့ လစ်ပြီလေ.။)
ကျနော့်သူငယ်ချင်းက မှတ်ချက်ပေးတယ်..၊ “ငါတစ်သက်လုံး ရန်ကုန်မှာ ကြီးလာတာ တစ်ခါမှ အဖမ်းမခံရဖူးဘူး..၊ ဒီအတိုင်းပဲ ကြုံသလို ကူးတာပဲ..။ မင်းနှယ်..၊ တောင်ပေါ်က ခုမှဆင်းလာပြီး ထူးထူးခြားခြား ကြုံရတယ်..၊ ထီထိုးကြည့်ဦး..၊ ကံကောင်းနေတယ်”တဲ့..။ “အခုတော့ မင်းသင်ခန်းစာ ရသွားပြီ မဟုတ်လား..၊ လမ်းဖြတ်ကူးမယ်ဆိုရင် ရဲရှိမရှိ အရင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာ။” ဟုတ်ပ..၊ ဒီလိုအဖမ်းခံရတဲ့အတွက် ကျနော် ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာက မျဉ်းကြားကနေ ကူးဖို့မဟုတ်ပါဘူး..၊ (တရားရုံးမှာလဲ ဒဏ်ငွေဆောင်ခိုင်းတာကလွဲလို့ ပညာပေးအစီအစဉ် မကြုံလိုက်ရပါဘူး..။) ကျနော်ရတဲ့ သင်ခန်းစာက လမ်းမဖြတ်ကူးခင် ရဲ ရှိ၊ မရှိ သတိထားဖို့ပါပဲ..။ ကားရှင်း၊ မရှင်းဆိုတာတောင် ဒုတိယနေရာရောက်သွားတယ်..။
ကျနော် အရင်ကလဲ ရေးဖူးပါတယ်..။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင် ရည်ရွယ်ချက်အရေးကြီးပါတယ်..၊ စေတနာမှန်ဖို့ လိုပါတယ်..။ စည်းကမ်းဥပဒေတစ်ခု သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာ မလုပ်မိအောင်ကာကွယ်ချင်လို့လား.၊ လူကျွံဘောဖမ်းကစားသလို ချောင်းမြောင်းလှည့်ပတ်ပြီး အပြစ်ပေးဖို့လား.. မသဲကွဲတာတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးပါ.။ ခုလို အသေးအဖွဲ ယာဉ်ထိန်းရဲဖမ်းတဲ့ကိစ္စကအစပေါ့..၊ နောက်နောင် လူကူးမျဉ်းကျားကကူးအောင် ပညာပေးချင်တာလား.၊ အလုပ်လုပ်ကြောင်းပြသရုံ၊ အမှုရရုံ၊ ဒဏ်ငွေရိုက်ရအောင်လေးပဲလား..။ Surprise Check အချိန်လွန်သွားရင် ကူးချင်သလိုကူး၊ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ကြလို့ သဘောထားသလား…၊ စသဖြင့်ပေါ့နော်…။
အနှစ်သာရမပါတဲ့၊ အပေါ်ယံရွှေမှုန်ကြဲ ပွဲလှရုံသက်သက်တွေကြားထဲ ကျနော်တို့နိုင်ငံ၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ နစ်မွှန်းနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ..။ အလုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရော အောက်ခြေက အထက်အရာရှိကို အစီရင်ခံစာ တင်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ လိမ်တယ်..၊ အရာရှိက သူ့အထက်ကို နှစ်ဆတိုးပြီး လိမ်တယ်..။ စာရွက်ပေါ်မှာသာ တိုးတက်နေတယ်..၊ လက်တွေ့မှာက ဇောက်ထိုးကြီး..။ သတင်းစာကိုင်ကြည့်ရုံနဲ့ ဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုး..။ လတ်တလော ကိုယ်အကျိုး ရှိရင်ပြီးရော.၊ နောက်နောင် ဘာဖြစ်ဖြစ်.၊ တိုင်းပြည်ဘယ်လိုပဲ ကျန်ခဲ့၊ ကျန်ခဲ့.. ဂရုမစိုက်ကြဘူး..။ ရေရှည်မှာ အထိနာတာကတော့ နိုင်ငံနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေပါပဲ..။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းဆုတ်ယုတ်မှုတွေကတော့ လက်ညှိုးထိုးမလွဲပါဘူး..။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြောင်းတော့ပြောင်းနေပါတယ်..။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မရှိပါဘူးလို့ ဖင်ပိတ်ငြင်း ခဲ့ရာကနေ ခုတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးနေတာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ..။ (ဟိုဟာလေးဖွင့်ပေးရင် ဆယ်ယောက်၊ ဒါလေးဖွင့်ပေးရင် အယောက် ၅၀၊ အိုဘာမားလာမယ်ဆိုရင် ၆၆ ယောက်၊ သူ့ဈေးနဲ့ သူရှိပါတယ်..။) လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဝေဖန်ခွင့်လဲ ရပါပြီ..။ (ဝေဖန်လို့ရပါတယ်.၊ ဒါပေမဲ့ ငါတော့မကြားစေနဲ့..၊ အို ကြားလဲ ဂရုမစိုက်ပါဘူးအေ…။) အပစ်အခတ်ရပ်၊ ဆဲရေးလဲ ရစပြုနေပါပြီ.. (အပစ်အခတ်ရပ်ပြီး အချင်ချင်း ဆဲ နေကြ တာလေ)။ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးလဲ အပြည့်အ၀ပေါ့…(ဆန္ဒပြမှ အစာငတ်ခံတယ် ထင်လို့လား..၊ နဂိုကလဲ စားစရာရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး..။) စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးလဲ တည်ဆောက်နေပြီလေ.. (လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားသူတွေချည်းပါပဲ..။)
“မင်းကတော်တော် စည်းကမ်းရှိတာကိုး..။ မျဉ်းကျားက မကူးလို့ အဖမ်းခံရတဲ့ကောင်က စကားကြီး၊ စကားကျယ် လာပြောနေတယ်”
ဟုတ်ပါတယ်..၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ..။ ပြီးစလွယ် ပေါ့ပေါ့တန်တန် လုပ်တတ် တာကတော့ ဘယ်သူမဆိုဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်..။ အရေးကြီးတာက လှိုက်စားမသွားဖို့ပါပဲ..။ အကျင့်ဖြစ်မသွားဖို့ သတိထားရပါမယ်..။ ငပေါကြီးလို့ မြင်ရင်မြင်ပါစေ..၊ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်၊ ဤကို ကျွဲလို့ မဖတ်ဘဲ၊ မိုးခါးရည်ကို ငြင်းဖို့ သတ္တိမွေးထားရပါမယ်..။ အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ အတုအယောင်တွေ၊ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် လုပ်ရပ်တွေ အားလုံးကို တိုက်ဖျက်ပစ်ရပါမယ်…။ ဒါ့အပြင် စေတနာမမှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေကို ပါးပါးနပ်နပ် ရှောင်ထွက်နိုင်မှ နိုင်ငံက တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်..။ ဒါမှလဲ ကျနော်တို့ သမိုင်းကို ပြန်အဖတ်ဆယ်နိုင်မှာပါ..။
ခုထိ ဘုရားထူး၊ အဘခေါ်ပြီး လက်အုပ်ချီနေရတုန်းပဲဆိုရင်တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ ပုဆိုး ပြောင်းဝတ်ရုံလေးကိုပဲ ပြောတာလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါပဲ..။
“လှတာက မကောင်းဘူးလား…၊ မောင်ရင်ရဲ့…။”
“ကောင်းပါတယ်ဗျာ..၊ ဒါပေမဲ့ ပွဲလှရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့… အင်း… လှတာမက်ရင် ညစာခက်ရချည်ရဲ့…။”
ZKN (19th Nov, 2012, 2:00 AM)
[အမှန်က ပွဲလှရုံသက်သက်(For show)မဟုတ်တဲ့ စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုအကြောင်း ရေးချင်တာ..၊ စာရှည်မှာစိုးတာတစ်ကြောင်း၊ အချိန်မရတာတစ်ကြောင်းကြောင့် နောက်မှပဲ ရေးတော့မယ်….။]
Posted by myu shadan at 3:24 PM No comments:
how to change your facebook email address fast 2012
TinangaFacebook account email hpe galai kau mayu yang ,gara hku galai ra ai ngu ai hpe yu hka ja sharin la ga i .
Posted by myu shadan at 10:19 PM No comments:
Windows 8 Activator [ALL VERSIONS] | 48 Mb
Download : Tutbobit
Posted by myu shadan at 7:53 PM No comments:
BusinessCards MX 4.74 | 93.7 MB (Mediafire link)
BusinessCards MX 4.74 | 93.7 MB
Pass : whereheart8@gmail.com
Posted by myu shadan at 7:52 PM No comments:
(IRWD ) ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က သီတာရပ်ကွက်ရှိ မိဘမဲ့ဂေဟာ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အိမ်ရှင် သားအဖ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၆ ဦး၏ အမှုမှာ တရားလို စရဖ (စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေး) ဘက်မှ ရုံးချိန်းလာရောက်ရန် ပျက်ကွက်မူများ၊ ရွေ့ဆိုင်းမူများကြောင့် ကြန့်ကြာလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မိဘမဲ့ဂေဟာ ပေါက်ကွဲပြီးနောက် မီးလောင်နေသည့် မြင်ကွင်း
(irrawaddy)အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်စဉ်နှင့် တိုက်ဆိုင်ပြီး ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်က လက်နက်ကြီးများ အသုံးပြု၍ ပစ်ခတ်သဖြင့် ဖားကန့်မြို့ပေါ်က စာသင်ကျောင်း အချို့ ပိတ်ခဲ့ရကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
Posted by myu shadan at 7:36 PM No comments:
by zz (myitkyina)
ဖားကန့်မြို့ ဗျူဟာမှူးရုံး မှ အောက်ခြေတပ်ရင်းသို့ စစ်ဆင်ရေးအတွက် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားရန် နိုဝင်ဘာလ(၁၅)ရက်နေ့ က ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ ညွှန်ကြားချက်တွင် KIA တပ်ရင်း(၆) တပ်တည်ရာ ကံဆီးရွာ ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန်အတွက် ရိက္ခာလက်နက်ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိပြီဖြစ်၍ မကြာမှီကာလအတွင်း ခလရ၊ ခမရ (၅၂)၊ (၃၄၇)၊ (၁၆)၊ (၂၂၉)၊ (၂၂၈)၊ (၃၈၃)၊ (၃၁၈)တပ်ရင်း များအားလုံး ပူးပေါင်းဖြန့်ခွဲ၍ အထူးထိုးစစ်ဆင်စနစ်ဖြင့် စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သဖြင့် မိမိတပ်များ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ် ခဲယမ်းများ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားရန်ဟု ညွှန်ကြားကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖားကန့်ဒေသတွင် ၁၂၀ မမ၊ ၈၁ မမ လက်နက်ကြီးများကို အမြောက်တပ်ရင်း(၂၀၈) က တောင်ကုန်း (၂)ခုတွင် နေရာဖြန့်ချထားပြီး ဖြစ်သည်။ အထူးထိုးစစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ရိက္ခာ၊ လက်နက် ပစ္စည်းများကို နိုဝင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့ စတင်ကာ စစ်ယာဉ်(၅၀)ခန့်နှင့် စတင်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by myu shadan at 1:46 PM No comments:
နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက်နေ့တွင် ၀ိုင်းမော်မြို့အခြေစိုက် ခလရ(၅၈)စစ်ကြောင်းနှင့် KIA တပ်ရင်း(၃) တပ်ဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ မြန်မာအစိုးရစစ်ကြောင်းဘက် အကျအဆုံးများကြောင်း သိရှိရသည်။
မန်စီမြို့နယ်၊ မဂျီကုန်းဒေသသို့ အင်အားဖြည့်တင်းရန် စစ်ကြောင်းချီလာသော ခမရ(၁၅)တပ်ဖွဲ့နှင့် KIA တပ်ရင်း(၁၂)တပ်ဖွဲ့တို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ မြန်မာအစိုးရစစ်ကြောင်း သည် တပ်ပျက်သွား ကာ ကစဉ်ကလျားထွက်ပြေးသွားခဲ့သည် စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အများအပြားသိမ်းဆည်းရမိ ကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ(၄)ရက်နေ့တွင် KIA တပ်မဟာ(၁)ဒေသအတွင်း ၀င်ရောက်စစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားနေသော တပ်မ(၃၃)လက်အောက်ခံတပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့ နှင့် KIA တပ်မဟာ(၁)တပ်ဖွဲ့ တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်(၆)ဦး ကျဆုံးပြီး (၅)ဦးခန့် ဒါဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by myu shadan at 1:27 PM No comments:
ကြိုသိ (ကချင်မြေ) (JP kasa)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြဿနာပိုကြီးသွားဖို့ ရှိတယ်
ပြည်သူတွေ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ နေရာမရှိ
လူတွေ အကောင်းမြင်နေတဲ့အချိန်မှာ အဆိုးမြင်ဖို့ အခက်သားဗျ။ ဒါပေမဲ့ မြင်တာကို မြင်တယ်လို့ မှတ်ဆိုသလို မှတ်တာကို ရေးကြည့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ဟာ အိုင်မာကြီးပေါက်နေသလိုပဲ။ အနာကို မခွဲရင်လည်း သွေးပုပ်တွေက ထွက်မလာ၊ ခွဲပြန်တော့လည်း အနာကျက်ဆေးက မရှိ၊ သူ့ဟာသူ ကျက်ဖို့ကလည်း ခရိုနီတွေက ဆီချိုသမားဆိုတော့ ပြည်သူတွေမှာ ခုခံအားက မရှိ ဖြစ်နေတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာ ခရိုနီလက်ထဲမှာဆိုတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မရှိဖြစ်နေတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲဟာ အခြေခံဥပဒေအရ မပြောင်းလဲသေးဘူး။ ပြောင်းလဲချင်စိတ်ရှိတယ်လို့ ပြောနေပေမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပဲ ပြောင်းနေကြတာပါ။ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်အရပဲ ပြောင်းနေကြတာပါ။ မူအရ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးဘူး။
ဥပမာတစ်ခု ပြောရရင် အမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေကို ကြည့်ရအောင်ပါ။ သူတို့က တရားဝင်ငွေတိုးငွေချေးခြင်းကို သိပ်မလုပ်ကြဘူး။ တရားမဝင်ဘဲ လုပ်ကြတာများတယ်။ နောက်ပြီး အမေရိကန်တွေ လုပ်သလို ချက်လက်မှတ်တွေကို မသုံးကြဘူး။ ငွေသားများကိုပဲ သုံးကြတယ်။ ငွေသားသုံးရင် ပိုလွယ်တယ်လို့ ထင်မှတ်ကြတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညစ်ပတ်ကြတဲ့အခါမှာ သက်သေက မရှိ၊ ဥပဒေအရ တိုင်တောဖို့ကလည်း မလွယ်ကူတော့ ညစ်ပတ်သူက သာမြဲသာနေပါတော့တယ်။
လက်ရှိအစိုးရခင်းကျင်းတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟာ ချက်လက်မှတ်မသုံးဘဲ ငွေသားကို နားလည်မှုနဲ့ လုပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီချုပ်ရော သိန်းစိန်တို့ပါ ဥပဒေအရ အာမခံချက်မထားကြပါဘူး။ ဦးအောင်မင်းတို့လုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဆိုသဟာလည်း ဘာအာမခံချက်မှ မရှိပါဘူး။ အရင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့် လုပ်ဖူးတဲ့နည်းအတိုင်းပါပဲ။ သူမရှိတော့တာနဲ့ ရေစုန်မျောပြီ။
လောလောဆယ်မှာ ပွင့်လင်းကာစဖြစ်လို့ အုံကြွမှု သိပ်မဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက လျှော့သွားတာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူး။ ရခိုင်အရေးအခင်းဟာ အစိုးရပယောဂပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ ဒါက ဥပမာတစ်ခုပါ။ ကချင်ကိစ္စမှာ အစိုးရက တိုက်ရိုက်ပါနေတော့ အနာပေါက်ဖို့အစပဲထင်ပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေက ၂၀၁၅ ခုကို မျှော်နေကြတယ်။ ဒီလိုမျှော်နေအောင်လည်း ကာလုံက အကွက်ဆင်ထားပြီသားပဲ။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၅ မှာ ဒီချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်လိုက်တာနဲ့ ပွဲက ပြီးပြီလို့ ထင်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ ပြဿနာအစစ်အမှန်က အဲဒီမှာ စမှာပါ။
မြန်မာပြည်မတိုးတက်ခြင်းမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်လို့ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်မှာ အစိုးရရော အတိုက်အခံများပါ တိုင်းရင်းသားအရေးကို ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ မလုပ်ကြသေးပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ စီးပွားရေးကိုပဲ ပိုစ်ိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို ဖွင့်ပေးမဲ့အစား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုပဲ ပွင့်အောင် သူတို့ဝိုင်းတွန်းကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီချုပ်နဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဘာမှမထူးပါဘူး။
ကချင်ကို ထိုးစစ်ဆင်တာကို ကြည့်ရင် ဗဟိုအစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လောက်တကိုယ်ကောင်းဆန်သလဲဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ U.N.F.C. နဲ့ ထိုင်းမှာ တွေ့ကြမယ်ဆိုတော့ U.N.F.C. သေးသိမ်သွားအောင် လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၈ ခုဥပဒေရှိ အခန်းငယ်တစ်ခန်းကိုပဲ ပြင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ လွှတ်တော်လည်း တကိုယ်ကောင်းဆန်တာပဲ။ သူတို့ဟာ ဗဟိုပြုတွေးခေါ်တဲ့စနစ်၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့စနစ်နဲ့ပဲ ရင်းနှီးခဲ့လို့ သူတို့ပေးမှ ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို မပြင်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုကို သူတို့ပိုင်တယ်လို့ ယူဆထားသလိုပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ ဒီချုပ်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကျယ်ချုပ်ရောက်နေတုန်းကနဲ့ မတူဘဲ အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ အရင်တုန်းက တိုင်းရင်းသားပါတီများနဲ့ လက်ပွန်းတတီး နေခဲ့ပေမဲ့ ကျေညာချက်ပေါင်းများစွာကို စွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ရှင်းပြမှုတွေကို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ မရခဲ့ကြပါဘူး။ အထူ့းသဖြင့် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ခပ်ခွာခွာ အနေကျဲလာတာကို လေ့လာသူတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီများဟာ သိန်းစိန်နဲ့တွေ့နိုင်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့နိုင်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်ရမလို ဖြစ်နေပြီ
မြန်မာလူမျိုးနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ နှစ်ပေါင်း(၅၀)ကျော် အတူနေခဲ့ရတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းမတူတာက မြန်မာများဟာ လူမျိုးအရ၊ ဘာသာစကားအရ၊ ကိုးကွယ်မှုအရ နှိပ်ကွက်ခြင်း မခံရပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုအရသာ ဖိနှိပ်ခြင်းခံခဲ့ကြရတာ ဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဟာ လူမျိုးရေးအရလည်း နှိပ်ကွပ်ခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်၊ ဘာသာစကားအရလည်း ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်၊ ကိုးကွယ်မှုအရလည်း ကန့်သတ်ခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်။ ဒီအကျိုးဆက်အရ ဥပမာ မော်လမြိုင်မြို့မှာ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ မွန်လူဦးရေက အများဆုံးပါ။ မြန်မာလူဦးရေက အနည်းစုပါ။ အခုအခါမှာ မြန်မာလူဦးရေက အများစုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ ဖိနှိပ်မှုအသီးအပွင့်ကို မြန်မာလူမျိုးများ ခံစားစံစားရတဲ့အဖြစ်ပါ။
ဒီချုပ်က အာဏာရခဲ့ရင်လည်း တကယ်လို့ အနုနည်းနဲ့ ဗဟိုပြုစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေကြဦးမယ်ဆိုရင်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျုိုးများဟာ အရင်တုန်းကလိုပဲ အခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးနေကြရဦးမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ထပ်တူထပ်မျှ အနှိမ်ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုများရဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ သာသနာကို ဒီချုပ်က လေးစားကြောင်း၊ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုရှိကြောင်း လက်ရှိအချိန်အထိ ဘာတစ်ခုမှ လုပ်မပြနိုင်သေးပါ။ တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့ရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်များကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးနိုင်ခြင်းနဲ့ ဒီချုပ်နိုင်ခြင်း ဘယ်လိုကွာလဲ။ ညီမျှခြင်းက အတူတူပါပဲ။
လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဥပဒေကို မပြင်ဘဲ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်ခဲ့ရင် ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတာနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပဲ။ ၂၀၀၈ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီချုပ်အနိုင်ရဖို့ သေချာတယ်။ ဒီလိုအနိုင်ရခြင်းမှာ
၁။ နိုင်ငံရေးရဲ့အဖြေတစ်ခု မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအဖြေအတွက် လမ်းစပဲ ဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ ကာလုံအဖွဲ့ဝင်တွေကို ဒီချုပ် မထိန်းနိုင်ခဲ့ရင်
၂။ ပါလီမာန်မှာ တိုင်းရင်းသားများအတွက် တန်းတူရေးကို မဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်
၃။ ပါတီအုပ်ချုပ်ရေး လျှော့ရဲနေခဲ့ရင်
လက်ရှိပြဿနာများဟာ ပိုမိုကြီးထွားလာဖို့ ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ မဟာမိတ်ရန်သူ ဟူသည်မရှိ။
(by: Ven re..)
Posted by myu shadan at 12:30 PM No comments:
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းေ၇းအတွက် .. ကချင်အေ၇းကို ဘက်မလ...
ကချင်ပြည်နယ် မငြိမ်းချမ်းလျှင် မြန်မာပြည် လည်း မငြ...
ပီဒီပီ ပါတီခေါင်းဆောင် ၅ ဦးကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ...
KACHIN COMMUNITY DEMANDS STRONGER ACTION FROM THE ...
how to change your facebook email address fast 201...
TSEP KAWP SHANGLAWT AI DE
ActiveState Perl Dev Kit Pro v9.2.1.296433 (x86/x6...
Adobe Photoshop CS6 13.0.1.1 Extended Full Repack ...
jv16 PowerTools Lite EX 2013 2.1.0.1201|7.23 Mb (M...
ToolWiz Software Collection (15.11.2012) | 86.9 MB...
150,000 thousand key Windows 8 and Windows7|6M...
Bigasoft Facebook Downloader v1.2.14.4652 Retail(M...
Aleo Flash Intro Banner Maker 4.0 (Mediafire link)...
Odin Data Recovery Professional 8.7.4 | 3.2 MB
Internet Download Manager 6.12 Build 25 +4patch+...
Rollback Rx Professional 9.1 Build 2697670671 Full...
EASEUS Partition Recovery 5.6.1 + Portable | 17.23...
Collage Maker v3.7 Rev E | 23.3 MB
Internet Explorer 10.0.9200.16438 P-e For W7/8 (X8...
Wise Data Recovery 3.19.171 + Portable | 1.75/1.81...
Advanced Batch Converter v7.02 | 5Mb
BS.Player Pro 2.63.1071 With Keymaker | 13 Mb (Med...
Pirates Of The Caribbean : The Legend Of Jack Spar...
Indiana Jones And The Infernal Machine | Single | ...
AudioTool Media Audio Record Edit Toolbox Pro v 12...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ပစ်ခတ်...
အပစ်ရပ်ရေး၊ ဒေသဖွံ.ဖြိုးရေးနဲ. ကချင်ပြည်နယ်။
Internet Cyclone v2.14 (3Direct link)
မြစ်ဆုံနှင့် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းမည်မဟုတ်
ပြည်ထောင်စု / တစ်ပြည်ထောင်စနစ်များ (ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ...
သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာပြည် လာမည်ဟု တရားဝင် ထုတ်ပြန်...
Mung Shawa Ni Lata Dat Ai Rai Ga Ai.
ပြည်ထောင်စု / တစ်ပြည်ထောင်စနစ်များ (ဖတ်ဖြစ်အော...
တိုင်းရင်းသား နဲ. လူမျိုး
jv16 PowerTools 2013 Lite 2.1.0.1200 Final | 7.2 M...
Free 3D Photo Maker 2.0.21.1031 + Portable | 20.9/...
ArcSoft MediaConverter 8.0.0.16 | 20.5 MB
Photodex ProShow Producer 5.0.3296|39.89 Mb
BurnAware FREE Edition 5.4 Beta + Portable | 8.07/...